Dr. Ali Birraa fi Ummata biyya isaarraa bahee ala jiraatu (Diaspora) - Oromia Shall be Free
Sirbaan haa sirbu! Nutti maalif wal nyaana? Dr. Ali Birraan ummata Oromootiif yaadu hin dhiisu. Isa malee eenyuunu yaadaa fi kaayoo isaa jijjiiru hin danda’u. Wanti nutti godhuu dandeenu: warra qophii ‘Diaspora-f’ jedhe biyya dhaqe, afooshaa keessa baasuu, akka nama dhukkuba ‘Ebola’ qabutii irraa fagachuudha. Qabsoon kee artiistoota irraati ta’u hin qabu; namoota ‘Diaspora’ saniin irratti ta’u qaba.
Dr. Ali Birraan: sirba isaa beekamaa fi jaalatamaa sirba; sabaa fi sablamoota gammachiisa jira.
Ni deema; ni deema
Biyya feteen dhaqa
Mee jecha ‘nideema’ jedhu haa laalu, haa xinxaliinu, haa hiika mataa isaa itti keenninu. Waanti tokko ‘nideema’ yeroo jennu, kallattii kaminnuu haa ta’u bakka tokko ka’e gara bakka tokkotti deemudha.
Dr. Ali Birran qophii ‘Diaspora’ irratii; “ni deema, ni deema. Biyya feteen dhaqa. Biyya kiyyaan dhufa” jedhe; gammadee uumatas gammachiise. Namoota tokko-tokkoof kan rakkoo ta’e, inni akkamitti ‘Biyya kiyyan dhufa” kan jedhu. Jedhe rakkoo maal qaba? Mee Obsi! Nama arrabisuu, tuffachuu fi iyyuurra. Ee! ‘Ethiopia dhufa’ kan jedhe; dagadeeti miti. San dura! Gargarummaan deemuu fi dhufu maal?
Deemuu fi dhufuun waliif faalladha. Oromoon rakkoo siyaasaa fi rakkoo adda addaatiin biyya bayaan osoo kaayoo galmaan hin gayeen biyyati deebi’aan. Sunis waliif faalladha. Dr.Ali Birra dhiisti sirban haarooftu asumati waa’ee kophee sirba; asumati waa’ee koofiyyaa hin sirbu. Kophee fi koofiyyaan waliif lukaa fi mataadha.
Dr. Ali Birraan namoota ‘diaspora’ irra dhufanitti kolfa, gorsa, itti hima jira. Warri ‘daispora’ bu’aa buufachuuf dhufani kasaaraa jiran. Ni yaadatu jedhe abdaadha; ‘Millennium fi Dam Diaspora’ irratii warri hirmaataan waan tanii fi wanta irra gayees. Baratu darbee dhufa malee; inni sirbuu fi dhamsa isaa dabriifachuu hin dhiifne. Yaa warra ‘Daispora’: “takka dhufun dhiirummaadha. Lama dhufun Haruummaadha.” Yaa ilmaan Abbaa-Gadaa: nama yakku, murti hin tan nama irraatti murteessuu, kaayoo nama xureesuu dhiisa. Boru miti har’a wal gurmeessaa, kaayoo ganama jalatti hiriira, shira siyaasaa xinxala, maaltu maalii fi eenyuutu eenyuudha addaan baafadha. Kanummaa gargaruman ilma namaa fi bineensoota.
Rakkoo fi jequmsa guddaa kan dhume. Dr. Ali Birran akkamiti; “Ethiopia dhufa!” kan jedhu. Dhugaa dubbachuuf anu baay’ee reefadhe. Waan Afaan isaa keessa bayee hin seene. Ee! Afaanuma isaa keessa baye. Haa ta’u malee, yeroo irra deebi’ee deeddeebi’ee itti yaadu; wanti inni jedhe sirridha. Dhugaadhas! Yaadaa fi dhamsa isaa beekuuf; ‘siyyaasaa Oromoo, Tigree fi Amaaraa’ sirritii beeku qabda. Yaadatu? Adda Demokraatawaa Oromoo (ADO/(ODF)ii fi dhabbin obbo Meelees waadaa waliif seenaani turan. Obbo Meelees ni du’e. Waadaa fi kaayoon siyaasaa ODF-llee waliin du’e. Hin duune jedhu. Dhugaa isaanitti. Du’aa fi jiruu giddu jira. Ni beektu jedhe abdaadha. Tigree garee lamaatu jira. Gareen tokko mootummaa fi biyyatii bulcha jiran; dhabba Amaraaf keennu barbaadu. Gareen lamaaffaa imoo ‘humnaan dhuufne, humnaan buuna’ ykn ni duuna malee nama tokkotiillee hin keenninu kan jedhu. Kun rakkoo gudda mootummaa cunqursaa jiddu jiru. Isaanu wal nyaata jiru. Dhabbiin Oromoo tokko-tokkoo maaliif kadhatu? Oromoon hin kadhatuu: akka Chiitatii fiigee, akka Boofatii furgee, akka Leencatii kaayoo isaa gonfata.
Xayyaaraa yaadaatin barrisaa jirta. Namni Oromoo ta’e Oromoo irrati shira hojjaatu. Qanaani yeroof jedhe boollolu. Kaayoo Oromootiin daldaaltu. Oromoo addaan faffacaasuuf yaada qabdu. Dhugaa sitti hima! Seenaa kee fi kan ilman keetiitu baddaa malee; kaayoo Oromoo hanga FAANA duubatti hin deebiistu. “Qabsaan ni kufa! Qabsoon itti fufa!”
Previous Aasxaa fi Alaabaa Kallacha Walabummaa Oromiyaa (KWO/OIF) labsuu.
Next Mare Dibaba’s sensational Marathon finish in Beijing – August 29, 2015